Ukusiza umama nature eyodwa Kalimba ngesikhathi! – Kalimbera – Ukuthengisa, Imicimbi, Izindaba kanye Izimemezelo – Kalimba Forum
I-Kalimbera - Ukuthengisa, ...
Usiza umama wendalo...
Ukusiza imvelo kamama eyodwa Kalimba ngasikhathi!
I-Kalimbera kanye ne-Tree-Nation Partnership
Igxilile esikweni nasekugubheni amagugu acebile ase-Afrika, i-Kalimbera izinikele ngokuphelele kumagugu nezindlela ezijwayelekile. Inhloso yethu idlula ukudala umculo; imayelana nokugcina indlela yokuphila eyeqa igeography, inkolo, kanye nobuhlanga. Sizibophezele ekusuleni imingcele phakathi kwethu. I-Kalimba ingase ibe upiyano oluncane kwabanye, edlalwa kusetshenziswa umunwe nesithupha, kodwa futhi iyingxenye ebalulekile yesiko lase-Afrika.
Kalimbera kanye nemvelo
Njengomculo othakazelisayo nohlanganisa konke we-Kalimba, sikholelwa ekudaleni umphakathi ochumayo ngokuhlanganisa nokwehlukahlukana. E-Kalimbera, siyawukhumbula umthelela oyingozi owenziwa ngabantu ezindleleni zesintu zokuphila kanye nendawo ezungezile, zombili ezixhumene ngokuseduze.
Ukushintsha kwesimo sezulu kanye nemiphumela ebhubhisayo elandelayo ewumlilo wamahlathi, izikhukhula, nokuqothulwa kwazo zonke izinhlobo zezinto eziphilayo kuwukuphaphamisa wonke umuntu. Ukugawulwa kwezihlahla, ukuchithwa kwamaxhaphozi nolwandle olungcolisayo kuye kwabangela isidingo sokuthatha isinyathelo, futhi lapho sithathwa ngokushesha, kuba ngcono.
E-Kalimbera, siyawazi umthelela omubi webhizinisi lethu endaweni ezungezile, yingakho sithathe izinyathelo zokuba nomthelela omuhle emvelweni. Umgomo wethu awukona nje ukukhansela umthelela omubi wokwenza ama-Kalimbas kodwa ukuba nomthelela omuhle ohlala njalo ngomzamo wethu.
Uhlelo olulodwa lulingana nesihlahla esisodwa
Ukuba neKalimba akusaphathelene nokugcina ubuciko besiko elikhohliwe; imayelana nokusindisa iplanethi. Imali oyisebenzisayo ukuthola iKalimba ingena ekusekeleni imvelo. Wonke amaKalimba athengwa eKalimbera ahumushela esihlahleni esisha esitshalwe endaweni ethile emhlabeni jikelele.
Ngenkathi uhlanganisa amashuni omlingo ngokunyakazisa kweminwe yakho nesithupha sakho, uhlanganisa ama-patchwork adingekayo ukuze uhlenge iplanethi yethu esebunzimeni obukhulu. Konke kuza umbuthano ogcwele ngokugcina izindinganiso zithandeka kithi kanye nendawo eziphila kuyo ziphephile futhi zizwakala.
Sihlanganyele ne-Tree-Nation, ephakathi kwezinhlangano ezisiza umphakathi ezihlonishwa kakhulu emhlabeni wonke ezisungulwe ngenhloso eyodwa yokuvumela abantu ngabanye kanye nezinhlangano ukuthi zitshale izihlahla. Baqhutshwa ukuba banciphise ukukhishwa kwe-carbon dioxide ngokugawulwa kabusha kwamahlathi nokutshala izihlahla ezindaweni lapho ukugawulwa kwamahlathi kuye kwenzeka. Imayelana nokubeka ibhalansi ngendlela efanele nokuhlehlisa umonakalo owenziwe emakhulwini amaningi eminyaka. Imizamo kaKalimbera ifana nokuwisa ibhakede, ibhakede elikudinga kakhulu ukuconsa.
Ezinsukwini zokuqala eziyi-10 selokhu sabambisana, iKalimbera isize ngezimali ukutshalwa kwezihlahla ezingama-474 emhlabeni jikelele. Lokhu kusho ukuthi indawo ephelele engamahektha angu-0.25 isibuyiselwe, futhi ukukhishwa kwe-CO2 engaphezu kwamathani angama-51 kususiwe. Iziza zethu zephrojekthi zifaka iNepal, iMadagascar, iTanzania, iKenya, iFrance, iThailand, ne-Argentina, okuwubufakazi bokuthi kufinyelelwa kanjani emhlabeni wonke ngalolu hlelo. I-Tree-Nation kanye ne-Kalimbera bahlehlisa umthelela omubi wokuguquguquka kwesimo sezulu esihlahleni esisodwa ngesikhathi, futhi amakhasimende ethu angawona mandla aqhuba lo mkhankaso.
Ungabona ihlathi lethu le-Tree-National lapha: https://tree-nation.com/profile/kalimbera
Siyabonga nonke ngokuba yingxenye yalo mnyakazo!
Isiqalo sesihloko Kubhalwe: 02/04/2021 11:29 pm
ImpesheniPosse futhi Khyla andrea ithandiwe
Ngiyacela Ngena ngemvume or Register ukuphendula kulesi sihloko.
Njengamanje ngibuka lesi sihloko izivakashi ze-2.
Latest Post: I-Poll - Flat board noma i-Resonance box? ilungu lethu entsha: yasminmosely813 Okuthunyelwe kwakamuva Okungafundiwe Okuthunyelwe Amathegi